Dawladihii Soo Maray Soomaaliya 1960-69kii.
Dawladihii Soo Maray Soomaaliya 1960-69kii. Magacdii Madaxweynayaasha iyo Wasiirada Dawladahaasi
Qaybta 1aad iyo 2aad:
By: Mahdi Faarax Aadan (Mahdi Gandhi)
Taariikh kasta waxay leedahay maalin la maamuuso hadaba Bishan Oktoobar waa Bisha loogu magacdaray Black History Month of Africa.Taariikda madoobayd ee Africa Soomaalidu Bishan Maxay ku leedahay ? Hadaba aan jaleecno magacyada Wasiirada Dawladihii Soomaliya ee 1960-1969
Magacyada wasiirada 1960-1969 Dawladihii Soomaaliya soo maray
Magacaanta Wasiirada Dawladihii ugu horeysay ee Soomaliya 1960-1969.
Raiisul wasaare ku xigeen
Doorashdii ugu horeysay ee Xisbiyo ee Soomaliya ka dhacda waxaana Ka qayb galay Xisbiyo tiro badan Juun,1964tii Waxaa ku guulaystay Xisbigii SYL Madxweyne Aaden Cadulle Cismaan Wuxuu Raiisul Wasaare u magacaabay
Raiisul Wasaaraha Jamhuuriyada Dimoqradiga ee Soomaliya
Dawladan waxay ku guulaysatay inay qalinka ku duugto in Xeebtii Soomaliyeed ee Faransiisku Gumaysto ee Djibouti Madaxbanaani Qaadan karto ayna gui karto oo laga ansaxiye Golaha Dawlada. Siyaasiyiinta Soomaaliyeedna Badankoodu waxay
10 juun 1967 Waxaa raiisul Wasaare noqday Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Illahay naxariistii janno haka waraabiyo wuxuuna soo dhisay dawlad cusub oo ka koobnayd 17Wasaaradood iyo Wasiiradooda waxaana Madaxweyne noqday
Raiisul Wasaaraha & Wasiirka arrimaha Dibedda
Raiisul Wasaare kugeen & Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda
Wasiirul dawlaha Xafiiska Raiisul Wasaaraha
Dawladan mar labaad ayaa dib loogu noqday halkan kagama sheekayn karno oo waa taariikh dheer, Laakiin waxaa mar labaad loo dhaariyey Maajo 1969kii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal , Raiisul Wasaaraha Jamhuuriyada Dimoqraadiga ee Soomaliya Illaahay ha u naxariistee inuu mar labaad soo dhiso dawlad Cusub wuxuuna soo dhisay dawlad ka koobnayd 16 Wasaradood iyo Wasiiradooda Waxayna kala ahaayeen sidan :
Raiisul Wasaaraha & Wasiirka Arimaha dibedda
Dawladani waxay ahyd Dawladii ugu dambaysay ee rayada Waxayna ku guulaysatay xoojintii xidhiidhka Caalamiga Doorashadii dawladan waxaa ka dhashay rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac rabshadahaas waxaa ka faaiidaystay Taliyihii Ciidan Xooga Dalka Soomaaliyed, General Maxamed Siad Barre iyo sarakiishii Ciidamada waxayna ahayd dawladii lagu dilay Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
 Dhamaad Qaybta 1aad-
Suaasha Caalamka ka taagan ?
Axmed Gurey oo kalle Soomaali ma soo mari doonaa ?
Xaaji diide iyo Geele Batal oo kalle Djibouti ma soo mari doonaan ?
Sheekh bashiir oo kalle Soomaali ma soo mari doonaa ?
Sayid Maxamed Cabulle Xasan oo kalle Soomaali ma soo mari doonaa ?
Cabillaahi Ciise oo kalle Soomaali ma soo mari doonaa ?
Aaden Cade oo kalle soomaali ma soo mari doonaa ?
Maxamuud Xarbi oo kalle Djibouti ma soo mari doonaa ?
Xasan guleed oo kalle Djibouti ma soo mari doonaa ?
Cabdiirashiid Cali sharmaarke oo kalle Soomali ma soo mari doonaa ?
Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo kalle Soomali ma soo mari doonaa ?
Cabdidirisaaq xaaji xuseen oo kalle Soomaali ma soo mari Doonaa ?
Siad Barre oo kalle Soomaali ma soo mari doonaa ?
ismaciil Omar gelle oo kalle Djibouti ma soo mari doonaa ?
Guled Naser C/Hi Ciise
Raggan oo kale way inagu dhexjiran laakiin dadka kama garanayno.. Why?
6.Thomas sankara(burcina faso) 6.H.Guled. 7.Jamaal cabdi Nasir .8.C/Ciise
Hadii tariikhdooda la qoro waxaa laga dhex arkayaa qabiil markaa
Dadweyna ayaynu waydiinaynaa halka aan kaga darno Taariikhda ?
Magacyada Wasiirada 1960-1969kii dawladihii Soomaaliya soo maray & Magacyada Golihii sare ee Kacaanka ee Dawladii General Maxamed Siyaad Barre
uu Madaxweyne Abdirashiid Cali Sharmaarke Xukumaayey oo Raiisul Wasaare
24tii Oktoobar 1969 waxay soo saareen bayaankoodii ugu horeeyey oo ka koobnaa
13 qodob oo khuseeya Siyasaasada Gudaha iyo Siyaasadda Dibedda ayna isku raaceen in Dalka lagu xukumo Waxayna kala ahayeen sidan : -
Qodobbada Siyaaasada Gudaha
1.In la dhiso Ummad u siman Shaqada oon lakal soocin, iyadoo loo
tixgalinayo waxkasta oo samaynaya nolosha dadweynaha Soomaliyeed
2. In dadka lagu hanuunsho horuumarinta dhaqaalaha, nolosha guud
Hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida wadanku horay ugu maro
3. In la cidhib tiro aqoon darrada, dadkana loo iftiimiyo qiimaha dhaxal
galka ah eehidaha iyo dhaqanka Soomaaliyedd.
4. In la sameeyo sida ugu haboon saldhigii qorista iyo horuumarinta Af-soomaliga
5. In la dhameeyo musuqmasuqoo idil, qaraabo kiilka, qabyaalada iyo wixii kale
ee kharibay bulshada
6. In la baabiyo asxaabta siyasadeed oo dhan.
7. In la sameeyo doorasho wakhtigii ay haboonaato doorasho madax banaan
doorasho madax banaan.
Qodabadda Siyaasadda Dibedda
1. In la taagero ururrada Gobanimo-doonka ah, iyo iskaashiga Caalamiga
1. In la horjoogsado dagaalna lagu qaado gumaysiga iyo gumaysiga cusub
3. In lagu dadaalo sidii dadka iyo dalka Soomaaliyeed laysugu keeni lahaa
4. In la ogolaado mabaadida nabadgelyada iyo wada noolaanshaha Addunka
5. In lagu socdo siyaasad cad ee dhexdhexaadka ah
6. In la aqoonsado mabaadida Ummadaha Midoobay iyo Ururka Midowga Africa.
Magacyadda Golihii Xoghayaasha iyo Wasiiradda
Generaal Jaamac Cal Qoorsheel.
1. S/Gaas . Jaamac Cali Qoorsheel
Xogahayaha Wasaarada Arrimaha Gudaha
2. Cumar Carte Qalib
4. Maxamuud Canbdi Caraale
5. Maxamed Aaden Sheekh
6. Xasan Cali Mire
7. Maxamad Maxmuud Cismaan
8. Maxamed Buraale Ismaaciil
9. Maxamuud Jaamac Axmed
10. Maxamuud Geelle Cilmi
11. Cusmaan Cali Nuur Qolof
12.Cabdulqaadir Aaden Cilmi
13. Axmed Maxamed Maxamed Maxuud Siilaanyo
27dii Abriil 1970 Waxaa gurihgiisa laga soo qabtay Generaal Qoorsheel
26dii Febraayo 1970 Waxaa la baabiiyey Dastuurkii dalka u dhignaa ee Muddo 10 sannadooda lagu soo dhaqmaayey.
22dii Maajo Maxamed Siyaad wuxuu qudbad ku jeediyey qofkii aan la socon karayn
Kacaanka inuu shaqada fuliyo ama isaga tago.
27dii Abriil 1970 Waxaa gurihgiisa laga soo qabtay Generaal Qoorsheel oo lagu eedeyey inuu xidhiidh la leeyahay kooxo budhacada oo raba inay shaqaqooyin ka ridaan xuduudaha U dhexeeya Ethiopia iyo Somalia isla markaana uu xidhiidh la leeyahay la leeyahay Ethiopia uuna rabo dawlada afgambiyo.
7dii Maajo 1970 Waxaa lala wareegay Shirkadihii ajanabiga oo dhan oo la
Qarameeyey. Dalkana wuxuu ka bilaaabay Iskaa Wax u qabso.
Is Casiladii xoghayaasha: Xoghayaashu waxay isku casileen Xukuumada
oo doonaysay inay wax ka badasho Manhajka waxbarashada ooy ka cadhoodeen
12dii luulyo 1970 Waxaa is casilay saddex xoghaye waxayna kala ahaayeen sidan:
1B. Xasan Cali Mire / Xoghayihii Wasaarada Waxbarashada iyo Barbaarinta
Waxaana lagu badalay
1T.Gaashaanle Cabdirisaaq Maxamed Abokor
2B Maxamuud Geelle Cilmi/ Xoghayihii Wasaarada Warshadaha iyo Ganacsiga
Waxaana lgu badalay
2T. Gaashaanle Axmed Maxamuud Faarax
3B. Cabdalla Aw Faarax Xasan/ Xoghayihii Wasaarada Beeraha
3T. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan
Muddo yar dabadeed waxaa isbedel lagu sameeyey Xoghayaashii hore ee
la magacaabay oo qaarkoodna xilka la qaadey qaarkoodna jagooyin cusub
loo Magacaabay waxayna kala ahayeen oo loo habeeyey sidan :
1.S/Guuto Salaad Gabarey Kediye oo ka mid ahaa Golihii sare ee Kacaanka
Waxaa loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhiga.
Jagadan cidna ma hayn waxaa hayey Gudomiyaha Golaha sare ee Kacaanka
2.G/dhexe Imaaciil Cali Abokor/ Golihii sare ee Kacanka
waxaa loo Magacaabay: Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Hanuuninta
waxaana Jagadan horey looga eryey Maxamed Jaamac Axmed
3. Cali Xaashin Sheekh Xuseen. Waxa loo magacaabay Xogahayaha
Wasaarada Hawlaha Guud. Waxaana jagadan horey u hayey oo laga ereye
Cabdulqadir Aaden Cabdulle.
4. Maxamed Cali Warsame. Waxaa loo Magacaabay Xoghayaha Wasaradda
Isgaadhsiinta Waxaana horey u hayey. Maxamed Canshuur Xasan
5. Saciid Ibraahim Xaaji Xuseen . Waxaa loo magacabay Xoghaya Wasaaradda
Xanaanada Xoolaha iyo Horuumarinta Reer Miyiga .Jagadan waxaa horey
u hayey. Maxamuud Maxamed Cusmaan
6.Sheekh Cabdi Qani Axmed . oo aha macllin Kulliyada Sharciga ka dhiga
Maadada Shareecada Islaamka .waxaa loo Magacaabay Xogahaya Wasaaradda
Shaqada Garsoorka iyo arrimaha Diinta .Waxaa Jagadaas horey u hayey
Cusmaan Nuur Cali Qonof.
7. Ibraahim Maygaag Samatar Xoghaya. Waxaa loo magacaabay Xogahaya
Wasaaradda Arrimaha Dibeda ,waxaa xilkaas laga qaaday Maxamuud Cabdi Caraale
INQILAABKII LAGU DILAY SARAAKIISHII GOLIHII SARE EE KACAANKA
6dii Maajo 1971dii Waaxaa Radio Muqdsiho si lama filaana uga hadlay Xogahaya Wasaaradda Warfaafinta & Danuuninta Dadweynaha: Gaashaanle Dhexe : Ismaacill Cali Obokor Wuxuuna shaaca ka qaday in la qabtay oo xabsiga loo taxaabay sarakiishan.
1. S/Guuto. Salaad Gabeyre Kediye
2. S/Guuto. Maxamed caynaanshe Guuleed
3. G/Sare. Cabdulqaadir Maxamed Guulledd ( dheel-dheel )
Saddexdan Sarkaal waxa lagu xumumay Diltoogasho ah 1luulyo 1970 waxaana
Lagu toogtay fagaaraha Dugsiga sare ee Booliska Xamar jajab Muqdsiho.
Waana maalintii Generaal Maxamed Siad Barre neeftuurey uuna ku jimicsaday xukunka.
Waxaana lagu eedeeyey inay qabanqabinayeen afgambi waxaana ku jirray 22 Sarkaal iyo hal qof oo rayada oo aah dadka siyaasada Soomalida ku guura.Waxaa amakaag iyo yaab ku noqotay xadhiga Korneel Dheel-dheel oon dambiga Shaqo kunlahayn ama aan la tuhmi karin. Badankoodana waxaa lagu xukumay xabsi daiim iyo 1sanno ilaa 30 sannadood oo xadhiga sarakiishan.
Golihii sare ee Kacaanka Faaíido iyo Khasaare wixiii laga dhaxlay
Dhamaanteen wan ka dharagsanahay faíido iyo khasaare wixii dawladaasi gaysatey
Halkana kuma soo koobi karno , laakiin hadan yara taabano dhowr qodob oo ka midyihiin sida.
11kii Janaayo 1972dii Golihii sare ee Kacanku wuxuu goaamiyey in luqadiihii shisheeye La cidhib tiro waxaana la go, aamiyey in xuruufta latiiniga Af-Soomaliga af-soomaali laga dhigo Dhamaana manhajka waxbarashada dalka oo dhan laga dhigo afsoomali.
Faiidooyinkii Dawladii Maxamed Siad Barre
In cadow soo Haweysan Dalka Soomaaliya
1973 waxaa Dhaman shaqalaha dawlada lagu amray inay ku khasbanyihiin Af-soomaliga inay qoraan ayna akhriyaan dhamaana xafiisyada dwalada lagaga shaqeeeyo. Waxana la qadey olole weyn oo loogu magacdaray OLOLAHA Afsoomaliga lana gaadhsiiyo Dhamaan baadiyaha iyo Magalooyinka dalka Jamhiiriyada Dimoqraadiga ee Soomaliya.
Dawlada Maxamed Siad Barre Boqolkiiba 70% dhaqaalaha Wadanka waxay galisay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed waxayna sababtay in la dhiso Ciidan tayo iyo tiro leh looguna Magacdaray Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kasoo jabiyey Quwadii ciidankii ugu quwada iyo Cududda weynaa Sub sahara Africa ee Ethiopia Tariikhda Africa, ee ku faani jirtey waligay lanagama guulaysan ismana dhiibin waxyna uubta ugu dhaceen Xoreynta Gobolka Soomali galbeed ee ,Gacanta ugu jirra Gumaysiga madoow ee xabashida. .1977dii
(Galbeed waa la xoreeyey waarsaa gaagaxisay gulufku waa halkiisa Gayiga SOOMAALI baa leh /Xasa gannay )
Faaiidooyinkii kalle ee Maxamed Siad Barre laga Dhaxlay
- Waxbarashada aas-aasigu waxay u ahayd Muwaadin kastoo Soomaaliyeed lacag laaan
- Jidka Ugu dheer dalka ee ka bilowda Hiiraan ilaa Dilla iyo Jidka u dhexeeya Goroowe iyo Bossaso
- Dhismayaasha Gegooyinka iyo Marsooyinka Magaalooyinka Waaweeyn ee Dalka.
- Cusbutaalada , Jaamacadaha & jidadka Muqdisho badankooda iyo samafaraayasha kala hora gaadiidka Caasimada Dalka Soomaaliya Muqdisho iyo Bilicdeeda
- Gurmadkii Abaaraha ee Gobollada Woqooyi in dadka lagu daadgureeyo Diyaaraddo loona fidiyey gacan Baniaadanimo iyadoo ogolaansho laga haysto
- Dhismaha Jabhadii FLCS Jabhada Xoreynta Xeebta Soomaaliyeed ee Djibouti laguna tababaray Dooxada la yidhaahdo Heemaal ee Degmada Saylac .
- Qabashadii shirkii Midowga Africa ee lagu qabtay Muqdisho 1974tii African Village .
- Waxay ka mid noqotay Jaamacada carabta iyo ururada heer calamiya ee ka jirra Aduunka
- warshadii la qarameeyey iyo Shirakadihii la qarameeyey oo kumanaan qof oo
soomali ah ka haleen shaqooyin
Dagaalkii 1977dii lagu jabiyey Ciidamada sida dadka qarkood aaminsanyihiin, halka kuwo kallena ay aminsanyihiin in dagalkaasi dal lagu xoreynayey, halka kuwa sadexaadna ay aaminsanyihiin ,In la badbadinaayey Xornimada Djibouti in Ethiopia iyo Somaliya Gacanta u galin labadooda ,
kala goostaan waxayna noqdeen Maroodiyaal laysku jabiyey
. Adigu macnayso
Khaladaadkii ay samaysay Dawlada Maxamed Siad Barre
Qabiil iyo qarabo kiil aan loo aabo yeelin
Boob iyo hanti urursi afarjeebley ah.
Waxaana dhismay jabhado ka horyimid xukunkii kali taliska ahaa
Jabhadahaas oo Dastuurkoodu ahaa yaa tolaay iyo qataye adna qaado.
Jabhadahani isma waydiin maxaan ku badalna ?, maxaa ka dambeeya?
xitaa Siad barre eryada mooyee
. Insha allhaahu midkoodna ma odhan..!!!!!!!!
Burburkii iyo huwintii madafiicda muwaadiniyiinta iyo burburkii dalkoo dhan
Waxaanay reebtay radadka maanta aan ku joogno oo wali taagan.
Maxase ka dambeeyey ? dadweynahaa la waydiini halkaan Taariikhda kaga darayno ?
Siada Barre ha xumaado, ha fiicnanaado, ha eexdo, wax ha dumiyo, wax ha burburiyo. Wax ha dhiso Maxaa ka dambeeyey ? adigoo degan u fiirso dadaweynahaa la waydiin halka aan kaga darayno Tariikhda adigoon caytamin, shakhsiyadna aan aflagadaeyn, qabiilna an aflaagaadeyn .
Halkeen taariikhda kaga darnaa. ?
Sobobta aan maqaalkan u soo qaatay:
Siad Barre wuxuu yimid xili loo baahnaa, wuxuuna tagay xilli aan loo baahnayn.
Sidaa darteed Somalia, Somaliland ,iyo Puntland waxay joogaan wakhti loo baahanyahay Waxayna tagi doonaan wakhti aan loo baahnayn, Madaxdiina ha caayina ha aflagaadaynina, ee canaanta waxqabadkooda, iyo wanagoodana sheega.
Miyaad diidantahay inuu Siad barre Soomaali oo dhan kaga siiyey hay oo waliba hay
aabihii ummadoow hay. ma dhuuntoow siyaad hay oo waliba hay oo waligaaba hay
wadadii cadayd cagta saarnaye . iyo Siad Barre inuu Somali oo dhan inuu adkaa ?
Ilaahay naxariistii jano haka waraabiyo dhamaan Hogaamiyashii Somalia oo dhan
Isku Dubaridkii :